Kubhadharwa Kuwanikwa neStumbleUpon Ads | Martech Zone
Kubhadharwa Kuwanikwa neStumbleUpon Ads
Chitatu, December 26, 2012 Chitatu, December 26, 2012 Douglas Karr
Chikamu chematambudziko nezvakakura zvemukati kugona kwekuti izvo zvemukati zviwanikwe uye nekugovaniswa. Isu tanga tichishanda nesimba gore rapfuura kuti zvinyorwa zvedu zvionekwe - uye zvave kushanda. Kubudikidza neyakazara yakaderera vhoriyamu mwaka, kushanya kwedu kuri kumusoro kubva kunosvika makumi matanhatu ezviuru zvekushanya pamwedzi kusvika kunopfuura makumi manomwe ezviuru zvekushanya. Sezvo tine vatsigiri, zvakakosha kuti isu tirambe tichiendesa zvirimo kune vateereri vatsva uye kuyedza nzira nyowani.
Imwe yemaitiro atanga tichangobva kuyedza anga ari StumbleUpon Kubhadharwa Kuwanikwa. Nepo mutengo wemushanyi usiri isingadhuri, pane zvimwe zvakanaka maficha eiyo system. Zvandiri kunyatsonakidzwa nezve kubhadharwa kuendesa ndezvekuti iri zvakare kupa nekukurumidza mhinduro pane izvo zvirimo zvirimo zvatiri kugovana uye chii chiri kutsvaga zvakanyanya kutarisisa. Ipo StumbleUpon ichivimbisa maonero kuburikidza nehukama hwavo, kugoverana kwehupenyu kunoitikawo.
StumbleUpon Kubhadharwa Kuwanikwa
Vakavimbiswa vashanyi - Usavimba neshambadziro kana zvinongedzo. Svetuka nhanho uye dhiraivha yako yekuteerera vateereri yakanangana ne URL yako (webhusaiti, vhidhiyo, peji rekumhara).
Inoenderana mamiriro - Isa nzvimbo yako yepaiti nezvakakodzera zvemukati sechikamu cherukova rwemasaiti akarongedzwa nezvido. Saiti yako ichaiswa pakati pezvakanakisa zvewebhu, muzvikamu zvaunosarudza.
Bhadhara pamushanyi akasarudzika - Bhadhara chete kune vanobatanidzwa, vakasarudzika vashanyi pane bhajeti iwe yaunodzora. Hapana mari shoma inoshandiswa uye hapana kubhidha kunodiwa.
Chikamu chinogumbura cheStumbleUpon Kubhadharwa Discovery ibasa remaoko rakabatanidzwa. Iwe haugone kungo wedzera chikafu kune ino sisitimu uye kuti iite otomatiki kusimudzira chinyorwa chimwe nechimwe. Yese URL inofanirwa kuwedzerwa zvakasununguka uye kutarisirwa. Iyo bhajeti yakagadzirirwa kune zuva nezuva huwandu, asi iwe haugone kungoisa yakazara bhajeti kuti imire… iwe unofanirwa kupinda mukati uye panyama kumbomira yega mushandirapamwe. Kune makambani ane zvakawanda zvemukati zvekugovana, zvinorwadza mubut. Izvo zvinosuwisa kukambani - uye StumbleUpon - nekuti iwo ndiwo makambani ane mari yekushandisa.
Ngatitarisirei kuti StumbleUpon Paid Discovery inowedzera mamwe mushandirapamwe manejimendi sarudzo. Ndagara ndiri fan weStumbleUpon uye ndinoramba ndichikoshesa basa ravanopa.
Tags: kubhadharwa kuwanikwachigumbuso adskugumburwa kwakabhadharwa kuwanikwa
Ipa Yako Webhusaiti Trust Trust
Zvita 26, 2012 na9: 44 PM
Ichi chinhu chandinofanira kunyatsotarisa mukati. Ini ndinogara ndichitsvaga makuru ekushambadzira mazano. Makorokoto pakubudirira kwako uye nekutenda nekugovana!